Prof. Cabdiwahaab: Waxaan weli la gaarin xilligii Shabaab la soo afjari lahaa | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Prof. Cabdiwahaab: Waxaan weli la gaarin xilligii Shabaab la soo afjari lahaa
Prof. Cabdiwahaab: Waxaan weli la gaarin xilligii Shabaab la soo afjari lahaa
Prof. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika ayaa sheegay inaanan la gaarin xilligii loogu talagalay in la soo geba-gabeeyo mintidiinta Ururka Al Shaabab.
Prof. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa sheegay haddii uu Mareykanka doonayo inuu soo afjaro Ururka Al Shabaab, aynaan ku qaadan lahayn muddo laba iyo toddobaatan saacadood ah.
“Waxaan weli la gaarin xilligii la soo afjari lahaa Al Shabaab. Mareykanka haddii ay doonayan maanta inay soo afjaraan dhibaatada Al Shabaab ku hayso Somaliya iyo Wadamada Gobolka, waxaan is dhihi karaa 72 saacadood kuma qaadanayso inay soo xir xiraan ragga Shabaab ugu waaweyn, oo maxkamadda ama Cadaaladda ay horkeenaan.” Ayuu yiri Prof. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
Waxa uu intaa ku daray in ay dadku garan la’yihiin sababta aanu Mareykanka xilligan ugu jeedin inuu soo afjaro Shabaabka hubeysan ee dalka ka dagaalama, isagoona sababta ku sheegay xilligii loogu talagalay soo afjaridooda, oo aan la gaarin.
“Dadka waxay fahmi la’yihiin muxuu Mareykanka uga biyo diidansan yahay arrintan? Waxaa weeyaan xilligii Al Shabaab la jabin lahaa ayaan la gaarin, xilligii la soo afjari lahaa ayaan weli la gaarin.” Ayuu yiri Prof. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
Waxa kaloo uu yiri “Waxaa xaqiiqo oo dhab ah in gudaha wadanka Somaliya ay saldhigyo badan ku leeyihiin wadanka Mareykanka, xog badan ayay uruuriyan, meelaha ay Al Shabaab ku dhuumanayan ayay garanayan, meelaha ay joogaan ayay garanayan, satellite bay haystaan, wax walba ayay kor kala socdaan.”
Isagoo ka qayb qaadanayay Barnaamijka Fallanqaynta VOA ayuu yiri “Mareykanka ciidamo fara-badan bay tababareen oo Somaliya ay leedahay. Ciidankan Soomaalida ah ee runtii dayacan oo haba yaraatee mushaar ku filan aan la siinayn, haddii saddex boqol oo dollar keliya looga soo goyn lahaa mushaarka Amisom, lana qalabayn lahaa, Ciidanka Soomaaliyeed ayaa raggan soo qab qaban lahaa. Maxaa yeelay juqraafiyadda ayay garanayan, luqadooda ayay garanayan, meelaha ay ku dhuumanayan ayay garanayan, xitaa qoysaska ay ka tirsan yihiin nimankan ayay garanayan. Marka Al Shabaab waxaa lagu xalaaleysanayan dalka Somaliya, arrintan waa mashruuc socda. “
Prof. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa su’aalo ka keenay sababta ay Amisom uga gaabisay la dagaalanka iyo waxa keenay in Ciidamada Dowladda Somaliya ka weecdaan la dagaalanka Shabaabka ay tahay, si uu u sii socdo mashruuca ururka.
“Maxay Amisom weeraro u qaadi la’dahay, oo ay u fadhidaa, oo aynaan Al Shabaab ula dagaalamayn? Waa su’aal is weydiin leh. Maxaa Ciidamadii Soomaaliyeed ee la tababaray meelaha qaar loogu daadinaya, oo haba yaraatee nimankan aysan u wajaheynin? Waa su’aal is weydiin leh. Maxay Ciidamada Militariga ee Mareykanka ay aadka u tababaraan, ee awoodda intaa le’eg leh ay u soo qab qaban la’yihiin wiilashan yar yar, oo toddobo kun aan gaareynin? Waxaa weeye su’aal uu qof kastoo Soomaali ah inuu is weydiiyo uu u baahan yahay.” Ayuu yiri Prof. Cabdiwahaab.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa ku aragti ah Prof. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad, oo Shabaabku u arka mashruuc loogu talagalay in lagu curyaamiyo horumarka iyo danaha dalka.